SARMS အမှုန့်စီးရီးပေးသွင်း - AASraw အမှုန့်
/ ထုတ်ကုန်များ / SARMS
SARMs အမှုန့်, ဟိုစတီရွိုက်နဲ့တူအန်ဒရိုဂျင်မူးယစ်ဆေးအဖြစ်သက်ရောက်မှု၏တူညီသောမျိုးရှိပေမယ့်သူတို့ရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်အတွက်အများကြီးပိုပြီးရွေးချယ်ဖြစ်ရန်ရည်ရွယ်နေကြအန်ဒရိုဂျင် receptor ligands.They တစ်ဝတ္ထုလူတန်းစားများမှာသူတို့ကိုအတော်လေးန့်အသတ်ထက်အများကြီးပိုပြီးလက်တွေ့လက္ခဏာများအတွက်အသုံးပြုခံရဖို့ခွင့်ပြု တရားဝင်ဟို steroids လက်ရှိအဘို့အတည်ပြုကြသည်အသုံးပြုသည်။
SARMs အမှုန့်နှုတ်ကိုအပ်ပေမယ့်ရွေးချယ်ကွဲပြားခြားနားကွဲပြားခြားနားသောတစ်ရှူးအတွက်အန်ဒရိုဂျင် receptor များပစ်မှတ်ထားနိုင်မော်လီကျူးဒီဇိုင်းဖို့အခွင့်အလမ်းကိုပေး။ ဒီဧရိယာ၌သုတေသန၏ရည်မှန်းချက်တစ်ခုစိတ်ကြိုက်တုံ့ပြန်မှုကိုခွင့်ပြုပေးရန်ဖြစ်ပါသည်: သူတို့က testosterone ဟော်မုန်းမှမယ်လို့အဖြစ်ကုထုံး၏ပစ်မှတ်ဖြစ်ကြောင်းတစ်ရှူးကိုတုံ့ပြန်လိမ့်မည် မလိုလားအပ်သောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများထုတ်လုပ်နေကြပြီးရှိရာကအခြားတစ်ရှူးကိုမမည်။
သေးတီထွင် SARMs အမှုန့်အဘယ်သူအားမျှထိုကဲ့သို့သောဆီးကျိတ်ဂလင်းအဖြစ်တစ်ရှူးများတွင်မဆိုအန်ဒရိုဂျင်သက်ရောက်မှုထုတ်လုပ်မပါဘဲကြွက်သားသို့မဟုတ်အရိုးတစ်ရှူးအတွက်ဟိုသက်ရောက်မှုများအတွက်အမှန်တကယ်ရွေးချယ်ကြသည်, သို့သော်အများအပြား nonsteroidal အန်ဒရိုဂျင်3ထက် သာ. ကြီးမြတ်၏အန်ဒရိုဂျင်သက်ရောက်မှုမှဟိုတစ်အချိုးကိုပြသ: 1 နှင့် 90 သလောက်မှတက်: 1: 140 တစ်အချိုးသည့် testosterone ဟော်မုန်းနှိုင်းယှဉ် 1 (rad-1), ။
ဥပမာအားဖြင့်, အကယ်. ပစ်မှတ် osteopenia သို့မဟုတ်အရိုးပွရောဂါနှင့်အတူသက်ကြီးရွယ်အိုအမျိုးသားများတွင်အရိုးကြီးထွားဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့ hypogonadism မရှိပေးခြင်းဆိုင်းဘုတ်များနှင့်တကွ, ဆီးကျိတ်သို့မဟုတ်ဝှေးစေ့အပေါ်ပြောင်လှုပ်ရှားမှုနှင့်အတူအရိုးနှင့်ကြွက်သားတစ်သျှူးပစ်မှတ်ထားသော်လည်း SARM အမှုန့်ကိုပိုပြီးနှစ်လိုဖွယ်ဖြစ်ပါလိမ့်မည်။
အမြိုးသမီးမြားအတှကျ SARm အမှုန့်ထွက်ရှိသောထိုကဲ့သို့သောအထီးကျားမဝိသေသလက္ခဏာများ (virilization) ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအဖြစ်အပျက်သဘောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများခြင်းမရှိဘဲ, အရိုး retention ကို, ဒါမှမဟုတ်လိင်စိတ်နှင့်အန်ဒရိုဂျင်လွှမ်းမိုးနိုင်သည်အခြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ function ကိုလှုံ့ဆော်မည်ဖြစ်ကြောင်း, ဒါကြောင့်ထွက်, အသည်းကမောက်ကမဖြစ်မှု LDL / HDL အချိုးတိုးမြှင့်ခြင်း, ။
1 ရလဒ် 8-13 ဖေါ်ပြသည်
စျေးနှုန်း ကျော်ကြားမှု rating
Show ကို 8 ထုတ်ကုန်များ
Show ကို 16 ထုတ်ကုန်များ
Show ကို 24 ထုတ်ကုန်များ
Carbasalate ကယ်လစီယမ် (5749-67-7)
၅ ရပ် (၁၁၇၀၄၈-၅၆-၃)
MK 677 (Ibutamoren) အမှုန့်
Cardarine (GW501516) အမှုန့်